နန္ဒထေရ် - ဝီကီပီးဒီးယား
(အရှင်နန္ဒထေရ် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
Most Venerable Nanda Maha Thera
Nanda, enticed by the Buddha to leave his bride-to-be and becomeamonk.
Shakya King Suddhodhana (father), Queen Maha Pajapati Gotami (mother)
အရှင်နန္ဒထေရ် သည် မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာတော်ဝယ် ဣန္ဒြေကို စောင့်ထိန်းသည့် အရာတွင် အမြတ်ဆုံး ဧတဒဂ်ရ ရဟန္တာဖြစ်သည်။
နန္ဒမင်းသား၏ ဖခင်သည် သုဒ္ဓေါဒနမင်းကြီး ဖြစ်သည်။ မိခင်မှာ မဟာပဇာပတိ ဂေါတမီ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားနှင့် ဖအေတူ မအေကွဲ တော်စပ်ကြသည်။ နန္ဒမင်းသားသည် သိဒ္ဓတ္ထမင်းသား၏ ညီတော်စပ်ပေသည်။
မြတ်စွာဘုရားသည် နန်းတော်တွင်းသို့ ဆွမ်းခံကြွတော်မူ၏။ ထိုအချိန်သည် နန္ဒမင်းသားသည် ဇနပဒကလျာဏီ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းမင်္ဂလာပြုရန် အချိန်ဖြစ်နေ၏။ ဆွမ်းခံပြန်ကြွသောအခါ သပိတ်ကို မြတ်စွာဘုရားသည် နန္ဒမင်းသား၏ လက်ထဲသို့ ထည့်လိုက်၏။ မင်းသားလည်း ဘုရားရှင်က ပြန်ယူလိမ့်နိုးနိုးဖြင့် လိုက်လာရာ နိဂြောဓာရုံကျောင်းတိုက်သို့ ရောက်သွား၏။ ကျောင်းသို့ရောက်သောအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် "ညီတော် ရဟန်းပြုမည်လော"ဟုမေး၏။ ထိုအခါ မင်းသားသည် အမှန်အတိုင်း မလျှောက်ဝံ့သဖြင့် ပြုပါမည်ဟု ဖြေလေသည်။ မြတ်စွာဘုရားသည် ရဟန်းတို့ကို မင်းသားအား ရဟန်းပြုပေးရန် မိန့်တော်မူ၏။ ဤသို့ဖြင့် နန္ဒမင်းသား၏ ရဟန်းကိစ္စ ပြီးမြောက်သွား၏။
နန္ဒထေရ်သည် ရဟန်းပြုသော်လည်း တရားအားမထုတ်နိုင် စိတ်တို့သည် ဇနပဒကလျာဏီ ထံရောက်နေ၏။ ဤအဖြစ်ကို မြတ်စွာဘုရား သိတော်မူ၏။ မြတ်စွာဘုရားသည် နန္ဒထေရ်ကို တာဝတိံသာနတ်ပြည်ကို ခေါ်သွား၏။ ထို့နောက် မြတ်စွာဘုရားသည် နတ်သမီးများကို လိုချင်ပါက တရားအားထုတ်ပါ။ နတ်သမီးများကို ရစေရန် ငါဘုရား ကတိပေးသည်ဟု မိန့်၏။ နန္ဒထေရ်လည်း နတ်သမီးများကို လိုချင်သဖြင့် တရားအားထုတ်၏။ ထိုအခါ သီတင်းသုံးဖော်တို့က လှောင်ပြောင်လေသည်။ ထိုအခါ နန္ဒထေရ်၏တရားအားထုတ်မှုတို့သည် လမ်းမှန်သို့ရောက်ကာ အာသဝေါကုန်ခမ်း ရဟန္တာ ဖြစ်သွားလေသည်။
မြတ်စွာဘုရားသည် နန္ဒထေရ်အား ဣန္ဒြေကို စောင့်စည်းနိုင်သာသူတို့တွင် အမြတ်ဆုံး ဧတဒဂ် ကို ပေးခဲ့သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ဦးရွှေအောင် - မဟာဝိဇ္ဇာ(သက္ကတ)၊ ဝဋံသကာ နှင့် သိရောမဏိ (၁၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၀၂). ဓမ္မပဒ (ယမကဝဂ်၊ စိတ္တဝဂ်၊ အပ္ပမာဒဝဂ်၊ ပုပ္ဖဝဂ် ပေါင်းချုပ်). အမှတ် ၃၈၊ ၁၀၉ လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့: ရာပြည့်စာအုပ်တိုက်, ၁၄၅။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နန္ဒထေရ်&oldid=414488" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၈၊ ၁၄:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။